Izimo zeTexas Holdem - UK 2021 ✅
Home » Imidlalo Yekhasino » I-Texas Hold’em » Izimo zeTexas Holdem
Ama-20 Texas Holdem Odds
Ngakho-ke ufuna ukuwina emdlalweni we-poker? Uma kunjalo, kufanele wazi ngezingqinamba. Okubalwe ngezansi kukhona ezinye izingqinamba ze-poker nolwazi olungasiza ukukhulisa amathuba akho etafuleni le-poker ngokuzayo lapho udlala.
Ukuqalisa ngezandla ze-premium
Ubuwazi ukuthi unethuba elingu-2.1% lokuqoqa isandla sokuqala phezulu, ngababili bezithombe, ama-aces amabili noma i-AK efanelekile? Uma ukwazile ukuthola lezi, zigcine futhi udlale ngokuqinile.
Uma unekhadi elilodwa nje elifushane lokugcwalisa ngokugcwele (ukudonsa okugwedlile), kukunikeza amaphesenti angama-34.97% okwenza isandla sakho.
Qaphela amakhadi afanele
Ngakho-ke unamakhadi amabili afanelekile. Ungadlali i-pair ngokuzenzekelayo ngoba izothuthukisa isandla sakho kuphela ngo-2.5%.
Unethuba elingama-32.43% lokuthola ipheya lamakhadi akho emigodi ku-flop.
Uma uqoqe umbhangqwana, ithuba lokushaya ezintathu zezinhlobo ezingama-7.5 / 1. Ngakho-ke kufanele udlale ngababili bakho abancane ngendlela efanele, futhi uma intengo ilungile.
Lesi akusona isizathu esinconywayo sokudweba, ngomfula kanye nokujika okulindeleke ukuthi kufike maduze.
Uma amabhangqa amabili efuna ukuwina, ama-pair amakhulu anamathuba angama-80% okuphumelela. Uma isandla sakho sinezindlovukazi futhi uqaphele ukuthi ukubheja kuphakanyisiwe futhi kwavuselelwa, kunethuba elikhulu lokuthi omunye umdlali unamakhosi, ama-aces noma kokubili. Lesi yisiginali eyodwa yokuthi sekuyisikhathi sokugoqa.
Ukuqoqa amakhadi ephelele
Unethuba elincane kakhulu lokuqoqa amakhadi aphelele. Uma isandla sakho sidinga amakhadi amabili ngqo ekujikeni nasemfuleni, unikezwa kuphela ithuba elingu-0.03%. Uma unenye, ithuba lokuqoqa elinye liyi-4.55% kuphela.
Ungalandisa ithuba lakho lokuqoqa ama-pair akhula ngesigamu emfuleni.
Uma ukwazi ukushaya umugqa oqondile ovulekile kumdlalo we-poker, uzonikeza ngamakhadi ayisishiyagalombili akhona angakwazi ukuphuma esandleni. Lokhu kusho ukuthi uzoshaya isandla sakho emfuleni u-31.5% njalo. Siphakamisa ukuthi uthola izimbiza ukuze ubuke ikhadi elilandelayo.
Ukuphikisana phakathi kwamakhadi amabili nama-overcards amabili kwaziwa njengomjaho noma i-coin-flip ngoba inhlanganisela ngayinye inethuba lama-50% lokuwina njalo. Manje, uma ama-overcards womdlali efanelekile, laba bobabili bazoba namathuba angama-46% kuya kuma-54%, kepha uma kungenjalo, ithuba lokuwina lenyusa inothi liye kuma-48% laya kuma-57% isikhathi esiningi.
Uma ikhadi eliphezulu lesandla sakho lifana nelomunye umdlali, kodwa unomkhahleli omncane, unikezwa kuphela ithuba elingama-24% lokuwina. Isibonelo, uma unendlovukazi ephikisana nenkosi noma i-ace, khona-ke ithuba lakho liyi-roughl1 ku-4.
Abadlali abaningi bazokhetha izixhumi ezilungele phakathi njengezingcono uma uziqhathanisa nama-aces ngoba lokhu kungakunika amathuba amaningi wokuqoqa uqonde futhi uqhume. Kepha uma uphethe ama-aces, ungakhathazeki. Khumbula ukuthi i-over-pair iyintandokazi enkulu kwizixhumi ezifanele cishe i-80% yesikhathi.
Uzophathwa nge-pair pair ephaketheni kanye njalo ezandleni eziyi-17.
Kufanele uhlale ugoqa izandla eziphansi. Noma isandla sakho sifanelekile, ithuba lakho lokushaya i-flush likhonjwe ku-0.8%.
Unethuba elincane kakhulu lokufaka amabhangqa amabili kumakhadi emigodi angabhanqiwe. Lokhu kufanele kukunikeze ithuba elingu-2% kuphela.
Uma ukwazile ukuqoqa ngababili ku-flop, unikezwa ithuba elingu-16.74% lokwenza indlu ephelele.
Enye indlu egcwele
Kepha uma ukwazile ukushaya kathathu, manje unethuba lama-33.4% lokuthola indlu ephelele noma okungcono ngasemfuleni.
Ngakho-ke uthathe ingozi ngamakhadi angahleliwe ukuze uthathe izimpumputhe futhi wabizwa yi-AK. Noma kunjalo, amakhadi aphansi okungahleliwe anikezwa ithuba le-35% lokuwina kulezi zimo.
Qaphela ama-jacks ephaketheni lapho udlala iTexas Hold’em Poker. Lawa makhadi angahle ukubukwa, kepha amathuba akho okuthola ikhadi eliphakeme ku-flop angama-52% kuphela. Lokhu kuhumusha kube yingxenye yamathuba okusinda kulo mdlalo.
Njengomdlali we-poker, futhi udinga ukunaka izingqinamba ezisetafuleni.
Izinkinga zingakusiza wenze izinqumo ezinolwazi ngezenzo zakho nezinqumo zokubheja.
Ukuqonda izingqinamba ezisetafuleni kuzokubeka ethubeni elingcono.